ငတ်မွတ်တောင့်တမိ – Grab Love Story
ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး အနီးက.. သစ်ပင်တေအွုံ့ဆိုင်း..စိမ်းစိုနေတဲ့ ..ခြံကျယ်ကြီးတခုထကဲ အိမ်ကလေး…။ အပြင်ကကြည့်ရင်တော့သာမန်ပျဉ်ထောင်အိမ်ကလေး ပါဘဲ .. ။ အတွင်းမှာတော့ သားသားနားနား..ဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့ ကျွန်းအလှကက်ွတွေ နဲ့ နံရံ တွေ.လျာထိုး.ကြမ်းတွေ နဲ့ ဖြစ်သည် . .။ အိပ်ခန်းလေးထမှဲာ..လေအေးစက် က အသံ သဲ့ သဲ့ မှအပ..တိတ်ဆိတ်နေသည် ..။ ဗိုင်ရာဂရာ သောက်ထားတာတောင် ..မရတော့ပါလား . .ငါ..ဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်အုံးမှဘဲ…..။. ဦးလေးစိုးသည်ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်…….ထိုင်ရင်း..ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ဘေးတစောင်း..လှဲနေသောဇီဇဝါရဲ့ဖြူဝင်းတဲ့အမို့အမောက်..အကွေ့အကောက် တေနွဲ့ ..လှချင်တိုင်း.လှနေတဲ့ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်တေကွို ကြည့်ရင်း.. သက်ပြင်းချသည် . .။ သူ ဇီဇဝါ့ကို ထပ်လိုးချင်နေသေးပေမဲ့ သူ့ လီးသည် ပြန်ထောင်နိုင်စမွ်း မရှိတော့ . .။ အကြိုကီး ပြန်လိုက်အုံးမယ် . .ဇီဇဝါ . .. ဟုတ်ကဲ့ အကိုကြီး . .. ဇီဇဝါ ကုတင်ပေါ်က ထပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ကျနေတဲ့ သူမ ထမိန်လေးကို ကောက်ပြီး ရင်လျားလိုက်သည် . .။ လွုပ်သွားတုန်ခါသွားတဲ့ ဇီဇဝါ ရဲ့ နို့လှလှတွေ ကို ဦးလေးစိုး မြင်ပြီး သဘောကျကျေနပ်နေသည် ..။ သူ့အပေါင်းအသင်းတြွေကား.. ..ဇီဇဝါကြောင့် သူ လူအထင်ကြီးခံရသည် . .။ ဇီဇဝါ့ ကို ထိန်းထားနိုင်လို့ . .။ မှန်တင်ခုံပေါ်မှာ အကြိုကီး ငွေနဲနဲ ထားခဲ့တယ် . .ဇီဇဝါ လိုတာသုံး . ..မနက်စောစော ဒေါ်အေးချုံ အဖေါ်ခေါ်ပြီး လမ်းလျောက် နော် . .အညောင်းပြေအညာပြေ . .. ဟုတ်ကဲ့ အကိုကြီး . .. ဇီဇဝါ သည် ခြံဝင်းထကဲ မောင်းထက်ွသွားသော တိုယိုတာ မတ်တူးကား ကို ငေးကြည့်ရင်း ကျန်ခဲ့ သည် ။
ဦးလေးစိုး..ခါတိုင်းလိုဘဲ..သူလိုချင်တာ..လုပ်ချင်တာတွေ ရပြီး..လုပ်ပြီးတော့ ပြန်သွားသည် . .။ဇီဇဝါ လဲ လေးကန်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ရေချိုးခန်းဆီကို လျောက်ခဲ့သည်။ ဇီဇဝါ့တကိုယ်လုံးညစ်ပတ်နေသလိုဘဲခံစားရသည်. .။.ရေချိုးချင်နေသည် . .။.ဦး လေးစိုးသည်..ဇီဇဝါ..ကို..ဒေါ်အေးချုံဆိုတဲ့..အဒေါ် ကြီး တယောက် နဲ့ ဒြီခံ .ဒီအိမ်လေးမှာ ထားသည် . .။ ဒေါ်အေးချုံက..ဇီဇဝါစား..ဖို့ချက်ပြုတ်ပေးရန်..ဇီဇဝါ တယောက်ထဲ ဖြစ်နေလို့ အဖေါ် လုပ်ရန်လို့ ဦးလေးစိုး က ပြောပေမဲ့ တကယ်တော့ သူ့ကယ်ွရာမှာ တခြားသူတေနွဲ့ ကမှဲာစိုးလို့ အစောင့်အဖြစ်နဲ့ ထားတာ လို့ ဇီဇ ၀ါသိပါသည် ။ တကယ်တော့ ဇီဇဝါ သည် ဦးလေးစိုး ရဲ့ ကီပင် ဖြစ်သည် . .။ ဇီဇဝါ သဘောပေါက်တာကတော့ ကီပင် ဆိုတာ အမြှောင်မယား..ဒါမှမဟုတ် အပျော်မယား ..ပေါ့ . .။ ဦးလေးစိုး သည် သငွ်းကုန်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းတွေ လုပ်သော..လူချမ်းသာကြီး တယောက် ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အသက်ကြီးပြီး ဝဖြိုးနေသောသူ့ဇနီးသည်နဲ့…မတင်းတိမ်နိုင်ဘဲ…. ဖြူဝင်းနုထွတ်နေသော..ဇီဇဝါ ကိုသူလိုချင်တဲ့အခါပျော်ပါးနိုင်အောင်ခြံတခြံထဲအိမ်လေးတလုံး..နဲ့..အစောင့်တ ယောက် နဲ့ ထားတာ ဖြစ်သည် .. ။ ဇီဇဝါ သည် ငွေမျက်နှာတခုထဲနဲ့ အဖေအရယွ်ဦးလေးစိုး ရဲ့ ကီပင် .. ဖြစ်ခဲ့သည်.. ..။ ခုနတုံးက ဦးလေးစိုး ဇီဇဝါ့ကို စိတ်ကြိုက် ကိုင်တယ်ွခဲ့သည်..။ဇီဇဝါ ရဲ့ တင်းမာဖီးထနေတဲ့နို့တေကွို ကောင်းကောင်းဆုတ်နယ်သည်..။ စို့သည် ..။ ဇီဇဝါ့ စငွ့်ကားတဲ့ ဖင်တုံးတေကွိုလဲ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်တွယ်သည် . .။ ဖင်တုံးနှစ်တုံးရဲ့ အလည်ဗဟိုကိုလဲ လက်ဖဝါးကြီးနဲ့ တဖန်းဖန်း ရိုက် သည် . .။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင် … ဇီဇဝါ့ ပေါင်ဂွဆုံ က မို့ဖေါင်းတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကိုတော့ ဦးလေးစိုး သည် လှလနွ်းလို့ဆိုပြီး ကြည့်လို့မဝ..နှခေါင်းကြီးနဲ့ ..ထိုးထိုးပြီးရွူနမ်းလိုက်..လျာကြီးနဲ့ သိမ်းယက်လိုက်..လုပ်သည် . .။ လှလိုက်တဲ့ အဖုတ် …။
ဇီဇဝါက သန့်လသဲ န့်သည် .. ။ စောက်ပတ် ကို နမ်းယက်တဲ့ အချိန် ဦးလေးစိုးဘာအနံ့မှ မရ . .။ ဇီဇဝါ .. မှောက်လိုက် . . အို ..ဦးလေးစိုး မှောက်ခိုင်းပြီ . .။ ဇီဇဝါ ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းတာပါ . .။ ဖင်တောင့်တဲ့ ဇီဇဝါ ကုန်းလိုက်ရင် ဖင်တေကွ သိပ်လှတာဘလဲို့ ဦးလေးစိုး ပြောလေ့ရှိသည် . .။ဖင်ကုန်းထားရင် စောက်ပတ်ကြီးက အနောက်ကို.. ပြူးထက်ွနေတော့ ဦးလေးစိုး အရမ်းကြည့်ရတာ စိတ်ထသည် ဆိုပြီး ရေရေလည်လည်ယက်တတ်သည် .. ။ ဇီဇဝါ ဖင်ထောင်ကာ ကုန်းလိုက်သည် ..။ စွင့်ကားဖြူဝင်းတဲ့ဇီဇဝါရဲ့ဖင်တုံးတွေ.ကြားကစောက်ပတ်..အကွဲကြောင်း..နီညို ညိုကြီးက ပြူးထက်ွနေသည် ..။ ဇီဇဝါက အမွေးပြောင်အောင် ရိပ်ထားသည် .. ။ တောက်..လှလိုက်တဲ့ စောက်ပတ် . . ဦးလေးစိုး တောင်နေတဲ့ လီးကြီး ဆတ်ကနဲ ခါသွားသည် . .။ သူယက်မယ်ဆိုတာ သိလို့ စောစောကဘဲ ဇီဇဝါ သည် သူမ စောက်ပတ်နဲ့ ဖင်တွေေ နရာကို ဆပ်ပြာမွေးနဲ့ သေသေချာချာ ဆေးကြောထားခဲ့ သည် . .။ ဦးလေးစိုး ယက်ပြီ . .။ အ…အ….အ…..အို..ဟင်…အို…ဟင် . .. .. လျာကြီးသည် စောက်ပတ်အကွေဲ ကြာင်းတလျောက် တပြတ်ပြတ်နဲ့ ပြေးလွားနေသည် .. ။ဦးလေးစိုး သည် ဇီဇဝါရဲ့ ခါးလေးကနေဆွကဲာ.. စောက်ပတ်ကို ယက်ပေးနေ သည် ..။ ဦးလေးစိုးသည်..ဇီဇဝါက..ထုတ်ဖေါ်တောင်းဆိုတာကို အမြဲ ကြားချင်သည် . .။ ဒီလိုဇီဇဝါ ကအကိုကြီးရယ်. .ဇီဇဝါအရမ်း…စောက်ပတ်ယားလာပြီ…. . .အကိုကြီး ရဲ့ လီးကြီး နဲ့ ဇီဇဝါ့ စောက်ပတ်လေးကို လိုးပေးပါလား . . လို့ညုတုတု နဲ့ ပြောရင်သူ စိတ်ပိုကြွပီး .လီးကိုတောင်စေသည်လို့ ဇီဇဝါ နဲ့ စဆုံကထကဲ ပြောပြထားလို့ အခုလို သူမ စောက်ပတ်ကို တပြတ်ပြတ်ယက်ပေးသောအခါ ဇီဇဝါက သူမကို လိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုပေးရလေသည် . .။ ဦးလေးစိုး ရောက်လာတဲ့အချိန်ဆို..အဖေါ်နေပေးတဲ့ ဒေါ်အေးချုံ က… အပြင်ကို ရှောင်ထက်ွပေးရသည် . .။ဦးလေးစိုးသည် ချက်ချင်း မလိုးသေး..။ ဇီဇဝါ့ကို လိုးပေးစေချင်ရင် အကိုကြီး လီးကြီး အစမွ်းကုန် တောင်လာအောင် စုတ်ပေးအုံးကယွ်. . .လို့ ပြောတော့ ဇီဇဝါလဲ ဦးလေးစိုး စိတ်တိုင်းကျ ..သူ့ လီးတန်ကြီးကို စုတ်ပေးရလေသည် . .။တခါတလေ…အစုတ်ကောင်းလို့ဆိုပြီး ဇီဇဝါ စုတ်နေချိန်မှာ ဦးလေးစိုး ဇီဇဝါ့ ပါးစပ်ထဲမှာဘဲ ပြီးသွားတတ် သည် . .။ စောစောကလဲ ..လျာလေးနဲ့ ထိုးပေးကယွ်. . ဆိုလို့ ဇီဇဝါလဲ အစမွ်းကုန် လျာနဲ့ ကလိပေးလိုက်တော့ လရေတွေ ဒလဟောပါးစပ်ထဲ ပန်းထုတ်ခါ ပြီးသွားခဲ့ သည် . .။ စောစောက စောက်ပတ်တအားယက်ခဲ့ လို့ ယားပြီး အလိုးခံချင်နေတဲ့ ဇီဇဝါမှာတော့ အလိုးမခံရလိုက် . .။ ဦးလေးစိုး တခေါခေါနဲ့ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ သည် . .။သူ့လီးတန်က ပျော့ကျသေးငယ်နေပြီ . .။ဇီဇဝါ သူ့လီးကို ကိုင်တယ်ွပတ်ွသပ်ပေမဲ့ ပြန်တောင်မတ်မလာတော့ .. ။
ဇီဇဝါမှာတော့ စောက်ပတ်တွေ တအားယားပြီး ကိုယ့်ဖါသာ လက်နဲ့ဘဲ ဖိပတ်ွနေခဲ့ရသည် .. ။ ဟုန်းကနထဲ ကြခွဲ့ ရတဲ့ရာဂမီးတေကွိုဖြေဖျောက်ပေးမဲ့သူ မရှိဘဲ..စိတ်တွေ ထကြွနေရသည် . .။ဦးလေးစိုးသည် အသက်၆၀ကျော်ပြီမို့..ပြန်နိုးလာသောအခါ လူက နိုးပေမဲ့ လီးက မနိုးတော့ . .။ဇီဇဝါ က အမျိုးမျိုးနှိုးဆွေ ပးပေမဲ့ လီးက ငိုက်နေသည် . .။ပြန်ထောင်မလာတော့ . .။ ဦးလေးစိုးက နောက်နေ့မှ ..ကောင်းကောင်းလိုးပေးမယ် . . လို့ ကျောလေးပတ်ွပြီး ပြောသည် . .။ ဦးလေးစိုး မကြာခင်မှာဘဲ ပြန်သွားသည် . .။ သူနိုင်ငံခြားကသွင်းတဲ့ မိတ်ကပ်..ရေမွေးတွေ နဲ့ ငွေတွေ ပေးသွားသည် ..။ ဒေါ်အေးချုံ ပြန်လာတော့ ဇီဇဝါ ဒေါ်အေးချုံကို အကျိုးအကြောင်းတွေ ပြောပြသည် .. ။ ဒေါ်အေးချုံက ဇီဇဝါကို သနားသွားသည် . .။ တကယ်တော့ ဒေါ်အေးချုံသည် ဦးလေးစိုးရဲ့ လူယုံတော် ဖြစ်သည် . .။ ဦးလေးစိုး က မပြန်ခင် ပြောသွားသည် ..သူထိုင်းနိုင်ငံ..ဘန်ကောက် ကို တပတ်လောက်ခရီးသွားရမည်တဲ့ ..။ အပြင်မထက်ွဖို့..ထက်ွရင်ဒေါ်အေးချုံကို ခေါ်သွားဖို့ မှာခဲ့ သည် .. ။ဇီဇဝါက စိတ်ချအကိုကြီး . .အကိုကြီး ဝယ်လာပေးတဲ့ ဒီဗီဒွီအချပ်တေဘွဲ.. ထိုင်ကြည့်နေမှာ . .အကြိုကီး ပြန်ရောက်မှ စောစောကလိုဘဲ ချစ်ကြမယ်နော် လို့..ချစ်စဖွယ်အသံလေးနဲ့ပြောလေသည်..ဇီဇဝါရေချိုးရင်း..အကိုကြီးဦးလေးစိုး ဆီက မရတဲ့ အထိအတွေ့တွေ . .ရ ရင်တောင်မှ မတင်းတိမ်ဘဲ … လိုလားနေတဲ့ ကာမဆန္ဒတေကွို သက်တူရယ်ွတူ လူငယ်တယောက်နဲ့ ဖြည့်ဆည်းပစ်လိုက်ချင်စိတ်တွေ အရမ်းဘဲ ဖြစ်ပေါ်နေရသည် . .။လက်က အလိုလို ပေါင်ဂဆွုံက အဂါင်္စပ် အကွဲကြောင်းဆီကို ရောက်သွားမိရသည် .။ ဇီဇဝါ သည် ဦးလေးစိုးရဲ့ ကီပင် ဘဝကို ရောက်ပြီးမှ ဆယ်ကျော်သက် အချိန်က စောက်ပတ်အရမ်းယား တုံးက လက်နဲ့ ပွတ်ပြီးအာသာဖြေခဲ့တာ မျိုး ပြန်လုပ်ဖြစ်နေသည် . .။ ဦးလေးစိုးကသူမစိတ်တွေ..ထကြလွာအောင်နှိုးဆွပေးသလိုဘဲ . .။ အသက်ကြီးတဲ့ လြူကီး နဲ့ လိင်ဆက်ဆံရတာ အားမရတော့ဘဲ ရယ်ွတူ လူငယ်တယောက် နဲ့ စိတ်လတ်ွကိုယ်လတ်ွအပီ လိုးပစ်လိုက်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေမိတာ ကြာပြီ . .။
ယားတယ်…..အရမ်း ယားတယ် .ေ…စာက်ပတ် အရမ်းယားတယ်ကွာ ..။ ဦးလေးစိုး ခရီးထွက်နေခိုက် ဇီဇဝါသည် သူမကို အစောင့်အဖြစ် အတူနေစေသော ဒေါ်အေးချုံကို စည်းရုံးလေ သည် ..။ဒေါ်အေးချုံကို ဦးလေးစိုးပေးတဲ့လစာငွေထက်..သုံးဆလောက်ရှိတဲ့ငွေ..လပ်ထိုးပြီး..အပြင်ကိုတ ယောက်ထဲ ထွက်သည် . .။ဒေါ်အေးချုံ ကလအဲ ဖေအရယ်ွကြီးကို..လင်လုပ်ရတဲ့ ဇီဇဝါ့ကိုသနားတယ်ဆိုပြီး . .သွားခွင့်ပြုသည် .. ။ဇီဇဝါပေးတဲ့ ငွေတေကွို သူ့မိသားစုဆီ ပို့ဖို့ ဒေါ်အေးချုံလဲ ကားဂိတ်ကိုသွားသည် . .။ ဇီဇဝါ ကားမှတ်တိုင်မှာ ရပ်နေသည် . .။ ဘတ်စ်ကား စီးမယ်ဆိုပြီး ရပ်စောင့်နေတာတော့မဟုတ် .. ။တက်ဆီကား လာရင်လဲ တားစီးမယ်လို့ စဉ်းစားထားသည် ..။ နေက တော်တော်ပူသည် ..။ ဘတ်စ်ကားတစီး ထိုးဆိုက်လာပေမဲ့ လူတေကွ ပြည့်ကျပ်နေပြီး ဇီဇဝါ တက်လို့တောင် မရ . .။ ဆလနွ်းကားအဖြူလေးတစီး ဇီဇဝါ့အရှေ့ကို ထိုးရပ်လာသည် . .။ မှန်ပြူတင်း နိမ့်ကျပငွ့်လာသည် .. ။ ညီမ . .မြို့ထဲ သွားမလို့လား . . ဟုတ်တယ် . . တက်လေ . .အကိုလဲ မြို့ထဲ သွားမလို့ဘဲ . . ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ . . ငေကွ အရေးမကြီးပါဘူး . .တက်..တက် ..လိုက်ပို့ပေးမယ် . . ဇီဇဝါလဲ မောင်းသူနဘေး..ရှေ့ခန်းမှာတက်ထိုင်လိုက်သည် . .။ဇီဇဝါ ကားထဲ ဝင်ထိုင်လိုက်တော့ လေအေးစက် အဲကွန်းဖငွ့်ထားတာကို ခံစားလိုက်ရသည် ။ မောင်းသူကိုအကဲခတ်လိုက်တော့ပိန်ပိန်ပါးပါး..အသားညိုညို..လူငယ်တယောက် .. ။ဇီဇဝါ့ထက်တော့ အသက်နနဲ ပဲိုကြီးမည် ။ မြို့ထဲ ဘယ်နေရာ သွားချင်လဲ . . ဘယ်နေရာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး .. ဇီဇဝါ လဲ အိမ်မှာ တယောက်ထဲ ပျင်းတာနဲ့ ချောကလက်လေးဘာလေး ဝယ်မလား ဆိုပြီး ထက်ွခဲ့ တာ . . ချောကလက် …အင်း . .ဗိုလ်ချုပ်ဈေး မှာ ရမယ် . .ကျနော့်အသိဆိုင်ရှိတယ် . .အော်..ဒါနဲ့ နံမည်က ဇီဇဝါ လား . .ကျနော့နံမည် က နေမင်း . . ဟုတ်ကဲ့ . .အကို..အကိုက ဘာအလုပ်လုပ်လဲ . .တက်ဆီကား ဆွဲတာတော့ မဟုတ်နိုင်ဘူး . .အကို့ကားက အပျံစားကြီး..အကွဲန်းနဲ့ ဘာနဲ့ . .ဟီး.. ကျနော် က လတ်တလော အလုပ်လက်မဲ့ ပေါ့. .ကျနော်က..နိုင်ငံခြားသင်္ဘော လိုက်တယ် . .အခုရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီးခဏနားနေတော့..အလုပ်လက်မဲ့ပေါ့ . . ဟယ် . .အကိုက သဘော င်္သားကိုး .. ဇီဇဝါလေ .. သဘောင်္သားဆိုတာကို ကြားဘဲ ကြားဖူးနေတာ..အခုမှဘဲ လူကိုယ်တိုင် ဆုံဘူးတော့တယ် . . နေမင်း က ရယ်သည် . .။
ဒါဆို..အကိုက သူဌေးပေါ့ . .ဟုတ်လား . . သူဌေး မဟုတ်ပါဘူး . .ဒီလိုပါဘဲ ..ရရစားစားပေါ့.. အံမယ် . .မုံ့ဝယ်ကျွေးရမှာ စိုးလို့လား . .အကို့ကို မကျွေးခိုင်းပါဘူး . .ဇီဇဝါ ကျွေးမယ် .. ခုလိုကားနဲ့ လိုက်ပို့ပေးတာ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါဘဲ အကို . . ဇီဇဝါကကော..ဘာလုပ်လဲ.ကျောင်းသူလား . .. အရင်ကတော့ စာပေးစာယူ တက်တယ် . .အခုတော့..မတက်တော့ဘူး . . ဘာလို့ . . ဇီဇဝါ က အခု အန်ကယ်ကြီးတယောက် ရဲ့ ကီပင်လေ . . ဗျာ …နေမင်း လန့်ဖြန့်သွားသည် . .။ နောက်နေတာလား..ဇီဇဝါ ..မနောက်ပါနဲ့ . . မနောက်ပါဘူး..အတည်ပြောတာ . .အဖိုးကြီး က ဇီဇဝါ့ကိုမိန်းမကြီးတယောက်နဲ့ ထားတာ . .အစောင့်သဘောပေါ့.. . .ဟီး..သူ့ကယ်ွရာ မှာ လူငယ်တွေ နဲ့ မရွုပ်အောင်..မကဲအောင်ပေါ့ အကို . . အခု ဘယ်မှာလဲ ..အဒဲီမိန်းမကြီး . . စိတ်ကောလူကော မွန်းကျပ်နေတာနဲ့ လွတ်လတ်ွလပ်လပ် တယောက်ထဲ ထွက်ချင်တာနဲ့ . .မိန်းမကြီးကို ငေနွဲ့ ပေါက်တယ်လေ . .အဖိုးကြီး ပေးတာထက် သုံးဆလောက် ပေးပြီး..တောင်းပန်ပြီး . .ထက်ွခဲ့တာပေါ့ . မယုံနိုင်စရာဘဲ . .ဇီဇဝါရယ် . .ဇီဇဝါ က အရမ်းချောတာဘဲ . . ချောတာနဲ့ ဘဲ အဖိုးကြီးတယောက် ရဲ့ ကီပင်မယား..မဖြစ်တော့ဘူးလား ..အကိုရယ် . .ဇီဇဝါတို့ က အရမ်း ဆင်းရပဲါတယ် . . နေမင်း က ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ထကဲို မောင်းဝင်လိုက်သည် . .။ထုံးစံအတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကြီးထမှဲာ လူစည်ကားနေသည် . .။ အစားအသောက်တွေ ရောင်းတဲ့ ဈေးရုံကြီးနားမှာ ကားရပ်စရာနေရာ ရသည် . .။ ဟောဟိုက ဆိုင်မှာ ချော့ကလက် အမျိုးမျိုးရတယ် . .ဇီဇဝါ . .သံရုံးတွေက ဝင်တဲ့ ဟာတွေ လာသငွ်းကြတာပေါ့ . အမေရိကန်..အဂင်္လ န်လုပ် ချော့ကလက်တွေ ရတယ် . ..လာ…အကို ဇီဇဝါ့အတက်ွဝယ်ပေးမယ် . . အို..မဟုတ်တာဘဲ အကိုရယ် . .ဇီဇဝါ့မှာ ပိုက်ဆံ ရှိပါတယ် . .ကိုယ့်ဖါသာ ဝယ်မှာပေါ့ . . . ဇီဇဝါ သည် ဈေးကြီးတဲ့အကောင်းစားချောကလက်ပြားတွေ ဝယ်သည် . .။ ဇီဇဝါက နေမင်းပေးတာကို လက်မခံ..။
ဇီဇဝါ လက်ကိုင်အိတ်…. ဖငွ့်လိုက်သောအခါ ငွေတွေ တထပ်ကြီး အိတ်ထမှဲာ ရှိနေတာ နေမင်း တွေ့ရ . သည် . .။ ဇီဇဝါ . .ဈေးထဝဲ င်အုံးမလား . .ဘာလိုချင်သေးလဲ . . ဟင့်အင်း . .မဝယ်တော့ဘူး . .အကို ဘာစားမလဲ ဇီဇဝါ ကျွေးမယ်. . အကို ကားနဲ့ ခေါ်လာတာ ဇီဇဝါ ကျေးဇူးတင်တယ်…သိလား . . ဇီဇဝါကော ဘာစားမလဲ . . ဇီဇဝါ ချောကလက်ဘဲ စားမယ် . .အကို တခုခု စား . . ဟင့်အင်း . ..စောစောက ဆာနေပေမဲ့ အခု ဘိုက်ြပည့်သွားပြီ . .. ဘာလို့ . . . ဇီဇဝါ နဲ့ အတူတူ သွားလာနေရလို့ပေါ့ . . အံမယ် .. အကိုကအလာကြီးဘဲ . .တကယ်ဘဲ ဇီဇဝါနဲ့ သွားလာနေရတာ ပျော်လားဟင် . .အကို.. ပျော်တာပေါ့ . .ဒီလောက် ချောလှတဲ့ မိန်းကလေးတယောက် နဲ့ အတူတူ သွားရတာ.. ကဲ..ဒါဆို ဇီဇဝါတို့ ..တနေကုန် လျောက်လည်ကြမလား . . ကောင်းတာပေါ့..ဇီဇဝါ ဘယ်သွားချင်လဲ . .. လူတေနွဲ့ ဝေးတဲ့ နေရာ . . အင်း ..သွားကြမယ်လေ . .ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲသွားမလား .. ဒါမှမဟုတ်. ခါကာဘိုရာဇီတောင်ကြီးပေါ်တက်ကြမလား . . ဟင့်အင်း . .ဆဟာရသကဲ န္တရ ထဲ သွားမယ် . . နှစ်ယောက်သားရယ်မောကြရင်း ကားထဲဝင်လိုက်ကြသည် . .။ ဇီဇဝါလေ . .အဖိုးကြီး ရဲ့ ကီပင်ဘဝနဲ့ နေရတာ စိတ်ထဲမှာ မွန်းကျပ်သလို ..ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြေးကြီး မိန်းမပျက်တယောက်လို..ခံစားရတယ် . . ဇီဇဝါ ရဲ့ အသံတွေ တုန်လာသည် . .။ နေမင်းက ကားမောင်းရင်း ဇီဇဝါရဲ့ လက်ကလေးကို ဆုတ်ကိုင်ထားလိုက်သည် .. ။ ဒို့ စိတ်မကောင်းဘူး ဇီဇဝါ . .ဇီဇဝါ ကို ဒို့ ဘယ်လို ကူညီနိုင်မလဲ . . ဇီဇဝါကတော့ သူ ခရီးသွားတုံး . .အခုလို စိတ်လတ်ွကိုယ်လတွ်..အကို့လို သဘောကောင်းတဲ့ လူတယောက်နဲ့ ဆုံမိပြီး လျောက်လည်ရတာကိုဘဲ ကျေနပ်နေပါပြီ . .ဦးလေးစိုး လက်ကထွက်ဖို့ကတော့..မလွယ်သေးဘူး..အကို . .သူ့ အထောက်အပန့်တွေ နဲ့ ဇီဇဝါတို့ မိသားတစုလုံးက နေနေကြတာ . . . ဇီဇဝါ စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ် . .ဇီဇဝါ ပျော်တာကို ဒို့ မြင်ချင်တယ် ဇီဇဝါ နေမင်းက ဇီဇဝါ့ လက်ကလေးကို ပတ်ွသပ်နေတော့ ဇီဇဝါ ရင်တွေ … ခုန်လာသည် .. ။
စိတ်တေလွုပ်ရှားလာသည် ..။ ကားလေးသည် ရန်ကုန်မြို့ပြင်ကို ဦးတည်နေသည် . .။ အကို . . ဟင်..ဇီဇဝါ . . ပဲခူးဖက် သွားမလား . . အင်း .သွားမယ် . . အကို ဇီဇဝါ့ကို သဘောကျလားဟင် . . အင်း..ကျတယ် .. ဇီဇဝါက အရမ်းချောတာဘဲ . .သဘောလဲ ကောင်းတယ် ..နောက်ြပီး . . နေမင်းက ဆက်မပြောဘဲ ဇီဇဝါ ရဲ့ ကိုယ်တေကွို ကြည့်နေသည် . .။ နောက်ပြီး . .ဘာဖြစ်လဲ . .ပြောလေ . . ကျန်းမာရေးသိပ်ကောင်းတယ် . ..လေ . . အိုး . .အကိုနော် .. ဇီဇဝါ့ကို ပြစ်မှားနေတယ်ပေါ့လေ . . ဇီဇဝါ့လို အစစလှနေတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ကို ..မကြိုက်တဲ့ ယောင်္ကျား ဒီလောကမှာ ရှိပါ့မလား .. အင်းလေ..ဒါကြောင့်လဲ ဦးလေးစိုး က ဇီဇဝါ့ကို စိတ်မချတာ ပေါ့..။ ဟင်း . .တရက်လေး အပြင် တယောက်ထဲ ထွက်လိုက်တာနဲ့ ဇီဇဝါ လဲ ညိတော့တာဘဲ . .။ နေမင်းက ဇီဇဝါ့ လက်ကို ဆုတ်ကိုင်နေရာက ဇီဇဝါ့ ပေါင်တန်တေကွို.. လှမ်းကိုင်လိုက်သည် . .။အဖေအရယ်ွအဖိုကြီး နဲ့ဘဲ..ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ ဇီဇဝါသည်..သူမနဲ့မတိမ်းမယိမ်းအရွယ်…နေမင်းကို..စိတ်လွုပ်ရှား..ရင်ခုန်မိရ သည်..နေမင်း.ဆုတ်ကိုင်လိုက်တာကြောင့်ဇီဇဝါ..ကြက်သီး..တဖြန်းဖြန်းထသွား သည် . .။နေမင်းလက် က ငြိမ်မနေ..။ဖဖွွေ လး ပတ်ွနေသည် ..။ ဇီဇဝါ . . ရှင် . .အကို . . ထောက်ကြံ့အကျော် မှာ ကိုယ့် အမျိုးခြံ ရှိတယ် . .ခဏ ဝင်ရအောင် . . ဘာလုပ်မလို့လဲ အကို . . ပျော်ပွဲစားသဘောပေါ့ . .ရေကန်လဲ ရှိတယ် . .။ စိုက်ခင်းတွေရော .. ဘယ်သူတွေ ရှိနေလဲ . .အကို့အမျိုးတေလွား . . ကိုယ့် ဦးလေး တယောက်ထဲ ရှိတာပါ . . နေမင်းရဲ့ လက် က ပေါင်တန်တလျောက် ပွတ်နေသည် . .။ ဇီဇဝါလဲ စိတ်တွေ ထကြလွာသည် . .။နေမင်းပေါင်ကြား အလည် လုံချည်အောက်ကနေ သူ့ လီးကြီး ထောင်ထနေပြီ .. ။ ထောက်ကြံ့ မှာ ဆိုင်တခု ဝင်ပြီး နေမင်းက စားစရာတွေ နဲ့ အချိုရည်ဘူးတွေ ဝယ် သည် . .။ထောက်ြကံ့ အကျော် လမ်းဘေး က တောလမ်းလေးထဲ ကားကို ချိုးကွေ့ဝင်လိုက်သည် . .။ နေမင်းရဲ့ ဦးလေးရဲ့ ခြံက ဇီဇ၀ါထင်ထားတာထက် ပိုပြီး သာယာသည် .. ။ ခြေတန်ရှည် အိမ်ကလေးဆီ လျောက်ခဲ့ကြတော့…ဝါးခမောက်ကြီးဆောင်းထားတဲ့ လူကြီးတယောက် ထွက်လာသည် ။ . ဟေး . .နေမင်း . . ဦးလေးဘ ..ပခဲူးသွားရင်း ခဏ ဝင်လာတာ ..စားစရာတွေ ဝယ်လာတယ်. .ခဏ စားရင်း နားမလို့ . . အေးအေး…အိမ်ပေါ်တက်ကြ . .လိုတာရှိလှမ်းအော်လိုက် . .ဦးလေး . .စိုက်ခင်းထမှဲာဘဲ ရှိမယ် . . လူကြီး ထွက်သွားသည် . .။
နေမင်း က ဇီဇဝါ့လက်ကိုဆွကဲာအိမ်ပေါ်ကို တက်သည် . .။ အိမ်ပေါ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိ . .။ တိတ်ဆိတ်နေသည် . .။ ဇီဇဝါ . . ရှင် . .အကို . . နမ်းချင်တယ် . . ဇီဇဝါ က ခေါင်းလေးညှိမ့်ပြသည် . .။ နေမင်းနဲ့ ..ဇီဇဝါ..နွုတ်ခမ်းချင်းပူးကပ်သွားသည် . .။ နေမင်းကို ဇီဇ၀ါတင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပြန်ဖက်မိသည် . .။ဇီဇဝါ့ နွုတ်ခမ်းတေကွို စုတ်နေရင်း နေမင်း သည် ဇီဇဝါ့ နို့တေကွို စမ်းသည် . .။ ဝတ်ထားတဲ့ .. အင်္ကျီကို ချွတ်ဖို့ ကြိုးစားသည် . .။ ဇီဇဝါ မငြင်းမိ . .။ သူမ လဲလိုလားနေတာအမှန် . .။ သင်ဖျူးဖျာ ခင်းထားသော ကြမ်းပေါ်ကို လအှဲိပ်လိုက်ကြသည် . .။ ဘရာစီယာလေး ကျွတ်ကွာ သွားသည် . .။ တင်းမာပြီး ကော့နေသော နို့နှစ်လုံး က အချုပ်အနှောင် မရှိတော့တာမို့ နေမင်း ကိုင်တာစို့တာတွေကို ဆက်တိုက်ဘဲ ခံနေရပြီ . .။ဇီဇဝါ့ နို့သီးလေးတေကွ နီညိုညိုလေးတွေ . .။ တင်းမာပြီး ထောင်ထနေသည် . .။ အို..အကိုရယ် . . နေမင်း က ဇီဇဝါ့ ထမိန်လေးကို ဆက် ချွတ်သည် . .။နေမင်း ပါးစပ်ကတော့ နို့တေကွို တဖက်ပြီးတဖက် စို့နေသည် . .။ထမိန်လေး ကို နေမင်း ခပ်လှမ်းလှမ်းကို ပစ်လိုက်သည် . .။ အတငွ်းခံ ပင်တီဘောင်းဘီလေး ကို သူ ဆက်ချွတ်ပြန်သည် ..။ အကိုရယ် . .ဇီဇဝါ တုံးလုံးကြီး ကွာ ..ရှက်တယ် . . နေမင်း က သူ့ အဝတ်တေကွိုလဲ ချွတ်ပစ်လိုက်သည် . .။ နှစ်ယောက်စလုံး အဝတ်အစားမရှိတော့ . .။ နေမင်း လီးကြီး က တော်တော် ကြီးသည် . .။ မတ်မတ်တောင်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေသလိုဘဲ ..။ ထိပ်အပေါက်လေးက အရေကြည်တွေ စိမ့်ထက်ွကျနေသည် . .။ ဇီဇဝါ့ ပေါင်ကြား မှာ နေမင်းရဲ့ ခေါင်းရောက်လာသည် . .။အို . .သူ . .သူ ..ဇီဇဝါ့ကို မွုတ်ပြီ . .။ ဇီဇဝါ့ကို ဘာဂျာမွုတ်ပြီ . .။ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် နဲ့ လူငယ်တယောက် က ယက်ပေးနေတာ ဦးလေးစိုးလို အဖိုးကြီး ယက်ပေးတာထက် ပို စိတ်ထကြရွ သလိုဘဲ ထင်မိသည် . .။နေမင်းသည် ဇီဇဝါ့ စောက်ပတ် ကို အငမ်းမရ ယက်နေသည် . .။
ဇီဇဝါလဲ..စိတ်တွေ..အရမ်းထကြွလာရပြီး..သူ့ခေါင်းက..ဆံပင်တွေကို..လက်နှစ် ဖက်နဲ့.. တအားဆုတ်ကိုင် ထားမိရသည် . .။ အား . .အကို…အား . ..အား . ..အား …ဇီဇဝါ ရဲ့ ပြောင်တင်းခုံးမို့နေတဲ့ စောက်ပတ်ကြီး ကို တပြတ်ပြတ် ယက်နေတဲ့နေမင်းလျာကြီးသည်စောက်ပတ်အတွင်းထဲကို..အတင်းတိုးဝင်နေ သည် .. ။ဇီဇဝါ ဖင်တုံးတွေ ..လူးလွန့်ကော့ပျံနေရသည် .. ။ တော်တော် အမွုတ်ကောင်းတဲ့ လူ . .။ တော်ပါတော့ . .လိုးပေးပါတော့လို့ မနဲ တောင်းဆိုလနွ်းမှ ရပ်သည် . .။ ခံချင်စိတ်တေကွ ထိန်းလို့ မရနိုင် . .။နေမင်းက ဇီဇဝါ့ပေါင်တန်တွေကို သူ့ ဒူးတေနွဲ့ တဖက်တချက်ကို တနွ်းခွလဲိုက်သောအခါ ဇီဇဝါလဲ ပေါင်တေကွို အစမွ်းကုန်ဖြကဲားပေးမိသည် . .။ နေမင်းလတဲ အားစိတ်တွေ..ပြင်းထန်နေပုံရသည် . .။သူ့ လီးကြီးကို ဇီဇဝါ့စောက်ပတ်အဝမှာတေ့ပြီး ထိုးသငွ်းလေသည် ..။ ဇီဇဝါလ.ဲ.စောက်ပတ်ထဲ ..တင်းပြည့်နေအောင်ဘဲတိုးဝင်လာတဲ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကြောင့်.ပေါင်တန်တွေ ကို တအားဖြကဲားပေးရင်း ဖင်တေကွို.. မြှောက်..ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ထောင်ပေးလေ သည် . .။ နေမင်း လိုးပြီ .. ။လီးကော ဆောင့်အားရော ဦးလေးစိုးထက် အစစ သာသောကြောင့်..ဇီဇဝါ ရေရေလည်လည် ကြိုက်သည် . .။နေမင်း အပေါ်က လိုးဆောင့်နေစဉ် အောက်ကနေပြန်ပင့်ကော့ပေး သည် . .။ အို..အကိုရယ် . .ဆောင့်ဆောင့်..တအား..ဆောင့် . .ဆောင့်ပေး . .လီးနဲ့ စောက်ပတ် အဝင်အထွက်က ကြမ်းသည် . .။ မြန်သည် . .။ ဘတ်ွဖတွ်…ဖွတ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ မြည်သည် . .။ ခြေတန်ရှည်အိမ်လေး ပေါ်မှာ … သွက်သက်ွခါနေသည် . .။နေမင်း သည် အသားလေးဖွေး ဖွေးဖြူပြီး ချောတဲ့ ဇီဇဝါ့မျက်နှာလေးကို ကြည့်ပြီး လိုးရတာ အထူးအရသာတွေ့ နေသည် .. ။ အားရပါးရ ဆောင့်ရင်း နေမင်းရော ဇီဇဝါရော ပြိုင်တူလို . .ကာမ ပန်းတိုင်ကို တက်လှမ်းမိကြရသည် . .။
မိန်းမ မလိုးတာ တော်တြော်ကာသွားတဲ့ နေမင်း ရဲ့ အားကောင်းလှတဲ့ သုတ်ရေတွေ သည် …တော်တော်ကြာအောင်ဘဲ ဇီဇဝါ့စောက်ခေါင်းထဲ ပန်းထုတ်နေသည် .. ။ အား…ကောင်းလိုက်တာ ဇီဇဝါရယ် . . ဇီဇဝါရောဘဲ . .သိပ်သိပ်ကောင်းတာပါဘဲ အကိုရယ် . . . နေမင်း က သူ့လီးကြီးကိုတဆုံးသငွ်းရက်နဲ့ဇီဇဝါ့ရင်ဘတ်အပေါ်မှာခေါင်းအပ်ခါ..အမောဖြေနေသည် . .။ ဇီဇဝါ မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားသည် .. ။ အဝတ်အစား မကပ်ဘဲ ကိုယ်တုံးလုံး အနေအထားနဲ့ အိပ်ပျော်သွားသည် .. ။ တကျိကျြွိကမ်းပြင်..ပေါ်နင်းလျောက်သံကြောင့် ..လန့်နိုးပြီး ..မျက်စိဖငွ့်ကြည့် တော့ နေမင်းမဟုတ် . .။ သူမကို တဏှာခိုးတေလျွံနဲ့ မျက်လုံးကြီးတစုံနဲ့ စိုက်ကြည့်နေသော ဦးလေးဘ …။ ဦးလေးဘ ကိုယ်ပေါ်မှာ အဝတ်ဆိုလို့ ချည်တမျှင်တောင် ရှိမနေ .. ။ လီးမမဲ တဲုတ်တုတ်ကြီး က မတ်မတ်တောင်နေသည် . .။ဦးလေးဘ က ဇီဇ၀ါအနီးကို တိုးကပ်လာသည် . .။ တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ဂွေး စိကြီး နှစ်လုံး က ခါရမ်းနေကြသည် . .။ ကို..ကိုနေမင်းကော . . ရေချိုးနေတယ် .. ကဲ ကောင်မလေး..ငါ့လဲ ပေးလိုးဟာ .. ဟာ..ဦးလေး..ကျမ..ကျမ..ဖါ မဟုတ်ဘူးရှင့် . . ဖါ မဟုတ်လဲ နင့်အတွက် လိုးတာ မဆန်းပါဘူးဟာ..လာပါ..ငါလဲ နင်တို့လိုးနေတာ မြင်ပြီးတအားနှာထန်နေပြီ .. ကဲ..ကဲ..ဖင်ကုန်းပေးစမ်း . . ဟာ..ခက်တော့တာဘဲ . . ဦးလေးဘ ရဲ့ လီးတန်ကြီးက ဇီဇဝါ့ရဲ့ ဖင်ကြားထဲ နွေးနွေး ကြီး လာဖိကပ်သည် .. ။ဇီဇဝါ ကြက်သီးတွေ ဖြန်းကနဲ ထသွားရသည် .. ။ ခက်မနေနဲ့ . .နင့်ကို ကောင်းအောင်လိုးပေးမှာပါ ..လာ..လာ..ကုန်းစမ်း… ဇီဇဝါ့ ဖင်တုံးဖြူဖြူကြီးတေကွို သူ့လက်ကြမ်းကြမ်းကြီးတွေ နဲ့ ဆွဲမ သည် ..။ အို..ဦးလေးဘ ..အို..အင့် . . ဗျိကနဲ လီးမာမာတုတ်တုတ်ကြီး စောက်ခေါင်းထဲတိုးဝင်လာသည..် ။ ဇီဇဝါ့နို့တေကွို ဆုတ်ညှစ်ရင်း ဦးလေးဘ လိုးပါတော့သည် . .။ဇီဇဝါသည် ဖင်ပူးတောင်းထောင်ပေး လိုက်ရသည် ..။ ဦးလေးဘ သည် စောက်ပတ်ကို လိုးနေတုံး ဇီဇဝါ့စအိုပေါက်လေးကို သူ့လက်မ နဲ့ ကလိပေးနေသည် . .။
ကောင်မလေး . .နင် ဖင်ခံဘူးလား . . အို . .ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း . ..မခံဘူးဘူး . .. နင့်ကို ဖင်လဲ လိုးချင်တယ် . .. ဦးလေးဘ ရဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီးက ဇီဇဝါ့ စောက်ခေါင်းထမှဲာ..အဆမတန်ကြီး တင်းပြည့်နေသည် . .။ ဟာ.ဦးလေးဘ . .စောက်ပတ်ကိုဘဲ လိုးပါရှင် . .ကျမဖင်ပေါက်လေးတော့ ချမ်းသာပေးပါ . . . ဟားဟား . .ကြောက်တယ်ပေါ့ . .ဟုတ်လား . .အင်းလေ…………. . .မင်းစောက်ပတ်ကလဲ ကျပ်ကျပ်လေး ဆိုတော့..မင်း စောက်ပတ်လေးကိုဘဲ လိုးပါတော့မယ် . . ဦးလေးဘ သည် စောက်ပတ်ကိုဘဲ နှစ်ချီ လိုးသည် . .။ အားရပါးရ လိုးသည် . .။ အလုပ်ကြမ်းသမားကြီး ဦးလေးဘ သည်…အလိုးကောင်းသူကြီး ဖြစ်နေသည် . .။ လီးကလဲ စံချိန်မှီကြီး ..။ ဇီဇဝါ ကြိုက်သွားသည် ..။ ဇီဇဝါလဲ ဦးလေးဘ အလိုးကောင်းလို့..အကြိမ်ကြိမ် ပြီးရ သည် . .။ ဦးလေးဘ လိုးပြီးတော့ နေမင်း က တချီလိုးပြန်သည် .. ။နေမင်းသည်လဲ အလိုးကောင်းသူ တယောက် ဖြစ်သည် . .။ ဇီဇဝါလဲဦးလေးစိုးနဲ့အားမရ..မကျေနပ်ခဲ့သမျှ..သူမလိုလားတဲ့အားကောင်းကော င်းနဲ့ လိုးပေးတာတွေ တ ဝကြီး ရလိုက် ရသည် . .။ ဇီဇဝါနဲ့ နေမင်း ပခဲူးကို မရောက်တော့ ..။ သူတို့ ရန်ကုန် ပြန်ရောက်တော့ မှောင်နေပြီ ..။ ဇီဇဝါ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဒေါ်အေးချုံ စိတ်တေပွူနေသည် .။ ကလေးမရယ် . .ညည်းပြန်မလာတော့ဘူးလားဆိုပြီး ဒေါ်ကြီး စိတ်တွေ အရမ်းပူနေတာ . .ညည်းပြန်မလာလို့ကတော့ မိုးမီးလောင်မှာ . .. ဒေါ်အေးချုံ သည်လဲ ဇီဇဝါ့လိုဘဲ ဦးလေးစိုး ရဲ့ အထောက်အပံ့ နဲ့ … အသက်ရှင်နေထိုင်နေရသူပါ . .။ဦးလေးစိုးကို အသေကြောက်ရသူဖြစ်သည် ..။ ဇီဇဝါ လေးချီအလိုးခံထားရလို့ တကိုယ်လုံး နာကျင်ကိုက်ခေဲ နသည် . .။ ဘာဘြဲဖစ်ဖြစ် ဇီဇဝါ ကျေနပ်သည် . .။ ဦးလေးစိုး ချုပ်ချယ်ထား လို့ လှောင်အိမ်ထဲက ငှက်ကလေးလို နေခဲ့ရတဲ့ ဘဝကနေ အခုလို အဝကြီး စိတ်ကြိုက် လီးကြီးတွေ နဲ့ အလိုးခံလိုက်ရလို့ဖြစ်သည် . .။
နောက်၃ရက်လောက်အကြာ ..ဦးလေးစိုး ပြန်ရောက်လာသည် . .။ မချစ်သော်လဲ အောင့်ကာနမ်း ရပြန်သည် . .။ ဦးလေးစိုး သည်..ထုံးစံအတိုင်း တက်လိုးနေတုံးဘဲ လီးကြီးက ပျော့ကျသွားပြန်သည် . .။ ဦးလေးစိုး က ဇီဇဝါ့ကို လီး စုတ်ခိုင်းသည် . .။ စုတ်ပေးလဲ လီးက ပြန်တောင်မလာ . .။ ဇီဇဝါ လဲ နေမင်းကို သတိရ တမ်းတနေပြီး ..နေမင်းနဲ့ ထပ်တွေ့ ဆုံဖို့ကိုဘဲ တွေး နေမိသည် ..။ ဦးလေးစိုး ခရီးထက်ွမဲ့ အချိန်ကိုဘဲ စောင့်စားနေမိသည် . .။ ဦးလေးစိုး စင်ကာပူကို သုံးရက်ကြာခရီးထက်ွသည် . .။ ဦးလေးစိုး သွားတဲ့ ညနေမှာဘဲ နေမင်းပေးထားတဲ့ ဖုန်းကို ဇီဇဝါ ဆက်သည် . .။ နေမင်းတော်တော်ဝမ်းသာသွားသည်.. …ဇီဇဝါ..နဲ့ထပ်တွေ့ချင်နေပေမဲ့ ဘယ်လို.. ဆက်သယ်ွရမှန်းမသိလို့…ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိဖြစ်နေတုံး..ဇီဇဝါ ဖုန်းဆက် လို့ နေမင်း တော်တော်ဝမ်းသာသွားသည် . .။ အကို နဲ့ ဇီဇဝါ အရမ်းတွေ့ချင်နေတာဘဲ … အကိုလဲ အရမ်းတွေ့ ချင်နေတာ.. အကို အခု အားလား . .ဇီဇဝါ နဲ့ လာတွေ့နိုင်မလား . . တွေ့ နိုင်တာပေါ့ . .ဒါနဲ့ ဇီဇဝါ့ အဖိုးကြီး ခရီးထက်ွသွားလား . . ဟုတ်တယ် . .သူ စင်ကာပူ ကို သွားတယ် . .သုံးရက်ကြာမယ် . .ဒါကြောင့် အကိုနဲ့ တွေ့ ဖို့ချိန်းရတာ . .အရင်တုံးက အဖိုးကြီးရှိနေတော့ .. လစ်ထက်ွလို့မရဘူးလေ..အကို .. အကို ဘယ်ကို လာခေါ်ရမလဲ . . အကို လာမခေါ်နဲ့ ဟိုလေ .. တနေရာက စောင့် . .ဟိုလေ . .ဇီဇဝါကြိုက်တဲ့ ပူတင်း ရောင်းတဲ့ ဆူးလေ ဘုရားလမ်းက… လဘက်ရည်ဆိုင်က စောင့် .. ဇီဇဝါ နာရီဝက်အတငွ်း လာခဲ့မယ် . . ကောင်းပြီ . . .ဇီဇဝါ… နေမင်း လဲ ဇီဇဝါပြောတဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင် ကို သွားစောင့်သည် .. ။ ဇီဇဝါသည် မိန်းမတယောက်နဲ့ ဆိုင်ထဲ ဝင်လာသည် . .။
ဝင်လာကထကဲ အဒဲီမိန်းမ ဟာ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာနဲ့ဆိုတာ နေမင်း တွေ့ လိုက်မိသည် . .။ ဇီဇဝါ နေမင်းရှိနေရာ စားပမွှဲာ လာထိုင်သည် . .။ လာ . .မဝါ ..ဒါ ဇီဇ၀ါပြောတဲ့ ကိုနေမင်း . ..အကို..ဒါ ဇီဇဝါ ရဲ့ ဘော်ဒီဂတ် မဝါ . .အခုလေ ဘော်ဒီဂတ်က..တယောက်မဟုတ်တော့ဘဲနှစ်ယောက်…ဖြစ်နေပြီ..ဒေါ်အေးချုံက တော့ အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့ တယ် .. ဇီဇဝါ နဲ့ မဝါတို့ ကော်ဖီ နဲ့ ပူတင်းစားသောက်ြကအပြီး . .ဇီဇဝါက အကို နဲ့ တနာရီနှစ်နာရီလောက်တော့ တွေ့ လို့ အချိန်ရမယ် . .အကို ဘယ်မှာ တွေ့ ချင်လဟဲ င် . .နေရာ ရှိလား . . . မဝါ က . . အော် . .မဝါ က ဇီဇဝါတို့သွားတဲ့ နေရာ လိုက်မှာ . .သူ နေတတ်ပါတယ် . .စောင့်နေမှာပေါ့ . . ဇီဇဝါနဲ့ မတွေ့တာကြာလို့ အားရပါးရ နှိပ်မယ်မှန်းထားတာ ဘိုက်ြကီးသယ် က ကန့်လန့်ကန့်လန့် ပါနေမယ် ဆိုလို့ နေမင်း သိပ် မကြိုက်ချင်လှ . .။ လာပါ အကိုရယ် . .ပြီးမှ ဇီဇဝ.ါ..မဝါ ပါလာရတဲ့ အကြောင်း ပြောပြမယ် . . ဇီဇဝါက နေမင်း ပိုက်ဆံရှင်းဖို့လုပ်တာကို လက်မခံ . .။ စလင်းဘက်အိတ်ကို ဖငွ့်ပြီး ငွေေ တွ တထပ်ကြီး ထုတ်ခါ စားသောက်တာတေကွို ရှင်းပြီး နိုင်ငံခြားဖြစ် ချော့ကလက်ပြားတွေ ဝယ်သည် .. ။ မဝါအတက်ွနဲ့ ဒေါ်အေးချုံ အတွက်လဲ ပူတင်းတွေ ပါဆယ် ဝယ်သည် . .။ သူတို့ တက်ဆီကားငှားပြီး . .လမ်း၅၀ က နေမင်း ..ဦးလေးရဲ့ တိုက်ခန်းကို ရောက်ခဲ့ကြ သည် . .။နေမင်း ဦးလေးက ရန်ကုန်မှာ မရှိ . .။
နယ်မှာ အလုပ်သွားလုပ်နေသည် .. ။ နေမင်းလလဲိုလားနေတာနဲ့ ..ဇီဇဝါနဲ့ အတငွ်းအိပ်ခန်းထကဲို ကတိုက်ကရိုက်ဘဲ ပြေးဝင်ကာ….ပြိုင်တူ..တချိန်ထဲ..သူတို့ကိုယ်ပေါ်က..အဝတ်အစားတွေကို…ချွတ် ပစ်ကြသည် ။ မဝါ ကတော့ အခန်းပြင်က ဆိုဖါကြီးပေါ်မှာ ထိုင်စောင့်နေသည် ။ နေမင်း ရဲ့ လီးတန်ကြီးက အကြောကြီးတွေ ထောင်ထကာ မတ်မတ်တောင်နေသည် . .။ဇီဇဝါ လဲ နေမင်း ရဲ့ လီးကြီးကို တွေ့ တာနဲ့ နေမင်းရှေ့ ဒူးထောက်ထိုင်ချကာ . .လီးကြီးကို တယုတယ ဆုတ်ကိုင်ပြီး . .ငုံစုတ်လိုက်ပါသည် . .။ အို . .. ဇီဇဝါ ရဲ့ လျာလေးက သူ့ ဒြစ်ကားထဲ တဆပ်ဆပ်နဲ့ ထိုးဆွပေးလိုက်လို့ နေမင်း .တွန့်သွားရသည် . ..။ ဖြူဝင်းတင်းမာတဲ့ နို့တေကွို..လှမ်းစမ်းလိုက်သည် . .။ဇီဇဝါက လက်တဖက်က လီးတန်ကြီးကို အရင်းက ဆုတ်ကိုင်ထားပြီး ကျန်တဲ့ လက်တဖက်နဲ့ နေမင်းရဲ့ ..တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ဂွေး စိတွေ ကို ကိုင်ဆုတ်ထားသည် . .။ဇီဇဝါရဲ့ လျာကစားပေးတာတွေေ ကြာင့် နေမင်း ပြီးချင်သလိုလို ဖြစ်လာသည် ..။ အားဟားဟား……အိုး..တော်ပြီ…လိုးကြစို့ . . .ဇီဇဝါ . . နေမင်း လဲ ဇီဇဝါ့ကို လှေကြီးထိုးပုံစံနဲ့ ဘဲ လိုးပါသည် . .။ဇီဇဝါမှာ ဦးလေးစိုးနဲ့ အားမရသမျှ အလိုးကောင်းသော လီးထွားထွားနဲ့ နေမင်း လိုးပေးတာကို အရမ်းသဘောကျကြိုက်နှစ်သက်ရ သည် . .။ နေမင်းမှာလဲ ဇီဇဝါ ပြီးအောင် လိုးပေးလိုတာကြောင့် လိုးရတာ အရမ်းကောင်းနေပေမဲ့ .. ပြီးမပစ်လိုက်ဘဲဆွဲလိုးပေးနေရာ..ဇီဇဝါမှာ..ကာမလမ်းဆုံးကို…တက်လှမ်းရောက် ရှိ ပြီး သွားလေ သည် . .။
ဇီဇဝါပြီးသွားတာနဲ့ သူလဲ စိတ်ကြိုက်လိုးဆောင့်ကာ.. ပြီးပစ်လိုက်မည် လို့ အားခထဲားတဲ့အတိုင်း..ပုံစံပြောင်းကာ လိုးရန် ဇီဇဝါကို လေးဘက်ကုန်းခိုင်းလိုက်ပါ သည် ..။ အကို ..ဇီဇဝါ့ကို မလိုးသေးဘဲ …မဝါကို တချီလောက် လိုးပေးနိုင်မလားဟင် . . ဘာ . . . နေမင်း သူ့နားကိုသူ မယုံနိုင် . .။ မဝါ..ဟုတ်လား . . ဘိုက်က တော်တော်ရင့်နေပြီ မဟုတ်လား..ဇီဇဝါ . . ဟုတ်တယ်..အကို..ဒါကြောင့်အကို့ကို.မဝါကို…ခေါ်လာခဲ့ရတဲ့.အကြောင်းပြော ပြမယ်လို့ စတွေ့တုံးက ဇီဇဝါ ပြောခဲ့ တာပေါ့ .မဝါက ရီးစားနဲ့ ဘိုက်ကြီးပြီး ရီးစားက မယူချင်ဘဲ ထက်ွပြေးရှောင်တိမ်းသွားတော့ အဒဲီကိုယ်ဝန်ရကထဲက ယောကျာ င်္းနဲ့ မလိုးဖြစ်တော့တာ ..အခု သူ သိပ် လိုချင်နေတယ် အကိုရယ် . ဒါကြောင့် ဇီဇဝါက အကိုကသိပ်သဘောကောင်းတာမို့…အကူအညီတောင်းပြီး လိုးခိုင်းပေးမယ် လို့ မ ဝါကို ပြောပြီး ခေါ်ခဲ့ တာ . .အကို သူ့ကို .. လိုးပေးလိုက်ပါနော် . .. ဖြစ်ပါ့မလား . .ဇီဇဝါ . ..ဘိုက်ကြီးနဲ့ . .. ဖြစ်ပါတယ် အကို..ဘေးတစောင်း လိုးရင်ရပါတယ်. .ဖြေးဖြေးလိုးပေါ့ .အာသာပြေရုံလောက်ပါဘဲအကို..မဝါလီးသိပ်တောင့်တနေတာ….. . .စောက်ပတ်ကလဲ တအားယားနေတယ်တဲ့… နေမင်းဘာမှပြန်မပြောခင်..ဇီဇဝါကမဝါ…မဝါ…..လို့..လှမ်းခေါ်လိုက်သည် . .။မဝါ ဝင်လာသည် . .။ နေမင်းလဲ အရေတွေ စိုပေနေတဲ့ လီးတန် မတ်မတ် ကြီးနဲ့ ရပ်နေဆဲ ဇီဇဝါ က မဝါ . .လာ..လာ .. ဒီမှာ အကို့လီးကို စုတ် .. .အကို..မဝါလေ . .လီးသိပ် စုတ်ချင်နေတယ်..ဇီဇဝါ့ကို ညည ဆို အမြဲ ပြောပြနေတာ . . မဝါက ရှက်သလိုနဲ့ . . အို..ညီမကလဲ . . ဆြိုပီး ခေါင်းလေးငုံ့သွားသည် ..။
ရှက်မနေနဲ့ မဝါ …ရတုံးရခိုက် လုပ်ထား..စုတ်ထား …နောက်မှ ညည်းမပြနဲ့ မဝါလဲ မျက်နှာလေး ရတဲ တ်ွနေသည် ..။ နေမင်းရှေ့ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး နေမင်းလီးကြီးကို သူမ ပါးစပ်ထဲ သငွ်းငုံလိုက်ပါသည် ..။ အင်း…ပထမဆုံး ကြုံဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံဘဲ . .။ဘိုက်ြကီးသယ်မ က လီးစုတ်ပေးနေတာ ..။ အရေတွေ ပေပွေ နတဲ့ သူ့ လီးတန်ကြီးကို မရံမွ ရှာ စုတ်ပေးနေတဲ့ မဝါကို သနားမိသည် . .။တကယ်ဘဲ လီးငတ်နေတာ သေချာသည် . .။ မဝါသည် သူ့ လီးကြီးကို အငမ်းမရဘဲ စုတ်ပေးနေပေသည် …။ဇီဇဝါက ကြိုက်လားမဝါ..လီးကြီးက ရှယ်ဘဲ နော် . . လို့ လှမ်းမေးတော့ မဝါလဲ လီးကြီး စုတ်နေဆမဲို့ ပါးစပ်က ပြန်မပြောနိုင်ဘဲ ခေါင်းညှိမ့်ပြလေ သည် .. ။မဝါ သည် နေမင်း ရဲ့ ဂွေး စိတေကွိုလဲ လျာနဲ့ ယက်ပေးသည် .. ။ နေမင်းလဲ မဝါ ရဲ့ နို့တေကွို ဆုတ်နယ်နေသည် . .။ မဝါသည် သူ့လီးကြီးကို အပီအပြင် စုတ်ပေး အပြီး နေမင်းသည် မဝါကို ဘေးတစောင်းလှခဲိုင်းပြီး လိုးပေးသည် ။မဝါမှာ တဟင်ဟင်နဲ့ ဖင်ကြီးကို အနောက်ပစ်ပြီး နေမင်းလိုးပေးသမျှကို သဘောကျစွာ ခံနေသည် ..။ဘိုက်ြကီး နဲ့ မို့ .တချက်ချင်း ဖြေးဖြေး လိုးပေးသည် . .။ဇီဇဝါက နဘေးမှနေမင်းရဲ့ လည်ပင်း နဲ့ ရင်ဘတ်တွေကို နမ်းနေသည် . .။ နေမင်းလဲ ဇီဇဝါက … အဝတ်အစားမပါဗလာကိုယ်နဲ့မို့ ဇီဇဝါ့ နို့ကြီးတွေကို လှမ်းစို့သည် ..။ မဝါလဲ ဖြေးဖြေးလိုးပေးနေတာကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်လာပြီး .. အကို..မြန်မြန်လေး . .. လို့ တောင်းဆိုလာသည် .. ။ နေမင်းလဲ ခပ်သက်ွသွက် ဖင်ကို ကော့ပြီး..လိုးပေးသည် . .။ မဝါလဲ တအင်အင် နဲ့ သူမဖင်ကြီးတွေကို အနောက်ကို နောက်ပြန် ဆောင့်ရင်း ကာမအရသာတွေ ထူးကေဲ နသည် ။ မဝါသည် အရေရွမ်းသူ မို့ နေမင်းလီးနဲ့ သူမ စောက်ပတ် အဝင်အထ က်ွဘွတ်ဗျိ..ဖတ်ွဖပ် နဲ့ အသံတွေ ဆူညံနေသည် . .။ လိုးအကို..လိုး..လိုး..ဆောင့်ပါ . . မဝါလဲ မရှက်တော့ဘဲ တောင်းဆိုလာသည် . .။ ဇီဇဝါလဲ မဝါ..ကောင်းလား . . လို့ လှမ်းမေးသည် . .။ ကောင်းတယ်… . .အရမ်းကောင်းတယ်. . မဝါလြဲပီးခါနီးလာပုံရသည် . .။ အို..တအား..အကို..တအား . .ဆောင့်..ဆောင့် . .မဝါပြီးသည်အထိ သူမ အလိုကျ ဆောင့်ပေးလိုက်ပြီးနောက်နေမင်းသူ့ကိုနဘေးကနေ..ဆွေ ပးနေသော ဇီဇဝါကို လေးဘက်ထောက် ကုန်းခိုင်းလိုက်သည် . .။
ဇီဇဝါလဲ သူမ.. ဖြစ်စေချင်သလို မဝါကို ကောင်းကောင်း လိုးပေးသော နေမင်းကို အရမ်း သဘောကျသွားသည် .။ သူ့ကိုတချီ..မဝါကို တချီအပြီး လိုးပေးတာတောင် မပြီးသေးဘဲဆွဲထားနိုင်တဲ့..နေမင်းကိုဇီဇဝါအထင်ကြီးသွားသည်ခေါင်းအုံးတလုံး ကို ကြမ်းပေါ်ချပြီးအဒဲီခေါင်းအုံးပေါ်..ဒူးထောက်ပြီး ကုန်းပေးလိုက်သည် . .။ နေမင်းလဲ ..ဇီဇဝါရဲ့ ဖင်ဖြူဖြူတြွေကားက ပြူးထက်ွနေတဲ့ .. စောက်ပတ်အမြောင်းကြီးကို လက်နဲ့ ကိုင်သပ်ခါ သဘောကျကျေနပ်နေပြီး သူ့လီးကြီး ကို စောက်ပတ်ထဲ ဖိထိုးသငွ်းလိုက်လေ သည် . .။ မဝါမှာ.. ရေချိုးခန်းထဝဲ င်ပြီး ဆေးကြော အပြီး ပြန်ထက်ွလာသည် . .။ ဇီဇဝါ့စောက်ပတ်ထဲ နေမင်းလီးကြီးတန်းလန်းကြီး သငွ်းမိနေတာ . .မဝါရဲ့ ကာမစိတ်တေကွို ဟုန်းကနဲ ပြန်လည် ထကြွစေလေ သည် ..။နေမင်းလဲ ဇီဇဝါ့ စောက်ပတ်ထဲ.တဆုံး.သွင်းတဆုံး..ထုတ်.တချက်ချင်းမှန်မှန်..လိုးဆောင့်ပေးနေ သည် . .။ အာ….ကောင်းလိုက်တာ အကိုရယ် . .ကျပ်ထုတ်နေတာဘဲ . .နေမင်း လဲ စီးပိုင်တင်းကျပ်လှတဲ့ ဇီဇဝါ့ စောက်ပတ်ကို လိုးရတာ အလွန် အရသာ ရှိနေသည် . .။ ဖင်ကုန်းပြီး..လိုးတဲ့အတွက်…ဇီဇဝါ့.ဖင်တောင့်တောင့်ကြီးတွေနဲ့..ဖင်ပေါက်နီနီ လေးကို ကြည့်ပြီး လိုးရတာလဲ မျက်စိအရသာ ရှိလှသည် .. ။ အရသာ ထူးလိုက်တာ ဇီဇဝါရယ် . ..ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ပတ်လေး . . နေမင်းလဲ ဒီတခါတော့ ပြီးအောင် လိုးတော့မည်လို့..ဆုံးဖြတ်ပြီး ..အားထည့်ကာ ကြုံးလိုးလေပြီ . .။ အား..ကောင်းတယ်အကို .. ဆောင့်..ဆောင့် . ..တအားဆောင့်ပေး… နေမင်း လဲ အသားကုန် ဆက်တိုက် ဆောင့်လိုးသည် . .။ ဖတွ်..ဖတွ်…ဖပ်..ဖပ်…ဖတွ်. . အိုး . .ကောင်းလိုက်တာ အကိုရယ် . .လိုး…လိုး . . .. ဇီဇဝါ့သေးကျဉ်တဲ့ခါးလေးကနေကိုင်ဆုတ်ပြီး..တအားဆောင့်ဆောင့်လိုးလိုက် ရာ မကြာခင်မှာဘဲ. .နေမင်းရဲ့ …အောင့်အီးထားတဲ့ သုတ်ရေတွေ..တထုတ်ထုတ် ပန်းထုတ်လိုက်လေ သည် .. . .။
ဇီဇဝါ က ရေချိုးခန်းထဲမှာ နေမင်းရဲ့ လီးတန်ကြီးကို ဆပ်ပြာနဲ့ သေသေချာချာ ဆေးကြောပေးသည် . .။ အကို..ဇီဇဝါတို့ တခုခု သွားစားရအောင်နော် . . အင်း..ဇီဇဝါ ဘာစားချင်လဲ . . တရုပ်အစားအစာ စားချင်တယ် . . စားလေ . .သွားကြတာပေါ့ . . နေမင်းသည ဇီဇဝ.ါ.မဝါ နဲ့ အတူ ကမ်းနားလမ်းမှ နံမည်ကြီး တရုပ်အစားအစာ ကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကို တက်ဆီနဲ့ ရောက်လာသည် .. ။ ဆိုင်ထဲ ဝင်ခါနီး အနောက်ဖက် က .. ဇီဇဝါ . . လို့ ကျယ်လောင်တဲ့ အသံကြီး နဲ့ ခေါ်လိုက်တာကို အားလုံး ကြားလိုက်ရသည် . .။ ခြာကနဲလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ ဇီဇဝါ ..တုန်သွားသည် . .။ ဟင်…အကိုကြီး . . ..ဦးလေးစိုး . . .. ဘာ . . နေမင်းပါ လန့်သွားသည် . .။ လှည်ကကြည့်လိုက်တော့ ..ကားတစီးထကဲ ထက်ွလာတဲ့ မျက်မှန်ထူထူကြီးနဲ့ ခေါင်းဖြူကြီးတယောက် ကို တွေ့ လိုက်ရပါသည် . .။ ဒေါသအမျက်ခြောင်းခြောင်း ထက်ွနေသောဦးလေးစိုး..လက်သီးဆုတ်ကြီးတွေက ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ထားနေသည် . .။ဦးလေးစိုး ရဲ့ မျက်နှာကြီး က နီရဲနေသည် ..။ ဇီဇဝါ…ကားပေါ်ကိုတက်စမ်း . . ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း . . အကြိုကီး ဇီဇဝါ မတက်ပါရစေနဲ့ . . ဦးလေးစိုးရဲ့ ကားပေါ်က လူနှစ်ယောက် ဆင်းလာသည် . .။ နေမင်း က .. ရှေ့တလှမ်းတိုးလာသောအခါ ဒီလူနှစ်ယောက် က နေမင်း ရှေ့မှာ ဝင်ရပ်သည်. .။ ဦးလေးစိုးက ဇီဇဝါကို ကားပေါ် အတင်းဆတွဲ င်သည် . .။
သူမလိုက်ချင်တာ..အတင်းအကျပ် မလုပ်ပါနဲ့ . .လို့ . .နေမင်း.. ပြောလိုက်သည် . .။ဦးလေးစိုးက .. ဟိတ်ကောင်..အသားမနာချင်ရင် ပါးစပ်ပိတ်ထား . .လို့ လှမ်းဟောက်သည် ..။ သူ့လူနှစ်ယောက် က သူတို့ အိတ်ထကဲ ဒါးတွေ ထုတ်ကိုင်လိုက်သည် . .။နေမင်း အနားကို .. တိုးကပ်လာကြသည် . .။ဒီအချိန်မှာ ဦးလေးစိုးဟာ ဇီဇဝါ နဲ့ အတူ ကားကို မောင်းထွက်သွားပြီ . .။ နေမင်း အနောက်ကို ဆုတ်နေရသည် . .။ လူနှစ်ယောက် က ဇီဇဝါ နဲ့ ဦးလေးစိုးလဲ မရှိတော့တာနဲ့ နေမင်းကို ဆဲဆိုပြီး ထပ်ရန်မပြုတော့ . .။ဘိုက်ကြီးသယ် မဝါ နဲ့ နေမင်း ဆိုင်ရှေ့မှာ ကျန်ခဲ့ သည် .. ။ ဦးလေးစိုး ဒေါသအရမ်းထွက်နေသည် .. ။ ဇီဇဝါ့ ကို ဖန်းကနဲဖန်းကနဲ ရိုက်သည် . .။ဒေါ်အေးချုံ မှာတော့ ဦးလေးစိုး နှိပ်စက်ထားလို့ စကားတောင် မပြောနိုင်တော့ ..။ ဇီဇဝါ..နင် ငါ့အပေါ် သစ္စာမရှိဘူး . ..ငါနင့်ကို ကောင်းကောင်းထားပါရက်နဲ့ နင် …ဖေါက်ပြန်တယ် . ..နင် ဒါအတက်ွပြန်ခံရစေမယ် . . မလုပ်ပါနဲ့ အကိုကြီးရယ် . .ဇီဇဝါ တောင်းပန်ပါတယ် . .ခငွ့်လွတ်ပါ . . ဦးလေးစိုး သည် ဇီဇဝါကို ခွင့်မလွတ် . .။ အောင်ကိုမြင့် . .. ဗျာ..ဆရာကြီး . . ဒီကောင်မ ကို လိုးစမ်းကွာ . ..မင်းလူတေဘွ ယ်နှစ်ယောက်…ရှိသလဲ..ခေါ်စမ်း . . အောင်ကိုမြင့် က သူ့တပည့်တေကွို ခေါ်လိုက်သည် . .။ အားလုံး ငါးယောက် .. ။အောင်ကိုမြင်က ဇီဇဝါ့အနားကို တိုးကပ်သွားသည် . .။ ရှင်တို့. … မတရားမလုပ်နဲ့ . .ကျမ အော်လိုက်မှာ..ကျမ ရတဲိုင်မှာ . .. အောင်ကိုမြင့်နဲ့ သူ့တပည့်များတဟားဟား ပကျွဲသွားကြသည် . .။
ဦးလေးစိုး က ဒီကောင်မ..ဒီလောက် စောက်ပတ်ယားပြီး လီး လိုချင်တာ ဝိုင်း လိုးကြကွာ ..ဖင်ကိုပါ လိုး…ဘယ်သူ လီးအကြီးဆုံးလဲ . .. လို့ မေးသည် . .။ အောင်ကိုမြင့်က ဇီဇဝါ့ အဝတ်တေကွို အတင်းဆွချွဲတ်သည် . .။ ဦးလေးစိုး သည် ရက်စက်ကောက်ကျစ်နဲ့ မျက်လုံးအစုံ နဲ့ သူ့ တပည့်တွေ ဇီဇဝါ့ကို မုဒိန်းကျင့်နေတာကို ရပ်ကြည့်နေသည် . .။ ဇီဇဝါ ရုန်းကန်တာနဲ့ အောင်ကိုမြင့်နဲ့ သူ့တပည့်တေကွ တဖန်းဖန်း ရိုက်နှက်သည် . .။ ဇီဇဝါ လဲ မထူးတော့တာနဲ့ အသားအနာမခံတော့ဘဲ သူတို့ လုပ်သမျှကို..အံကြိတ်ခါ ခံရတော့ သည် ..။ အဆိုးဝါးဆုံးက သူမ ဖင်ကို လီးကြီးကြီးနဲ့ လိုးတာပါဘဲ။ သူမကို ဖင်လိုးနေချိန်မှာ ဇီဇဝါသည် သူမ အရှေ့ကနေ လီးကြီး အတင်း ပါးစပ်ထဲ လာထိုးသငွ်းတဲ့ အောင်ကိုမြင့် အလိုကျ သူ့ လီးမမဲ နဲံနံကြီးကို စုတ် ပေးနေရသည် . .။ အောင်ကိုမြင့်သည် စုတ်နေတာကို အားမရဘဲ ဇီဇ၀ါ့ ပါးစပ်ထကဲို ညှောင့်လိုးလေသည် .. ။ ဦးလေးစိုး သည် ဇီဇဝါ ဖင်လိုးခံနေရတာ လီးစုတ်ပေးနေတာတေကွို ဗီဒွီယို ရိုက်သည် ..။ ဒီကောင်မ ကို မင်းတို့လိုးပြီးရင် ဖါခန်းပို့ကွာ ..ဖါခေါင်း မြဲကုတ် ကို တာဝန်ပေးလိုက် . . ဖင်ပေါက်ထဲ လီးတုတ်တုတ်ကြီး ထိုးဆောင့်နေတုံးမှာဘဲ အရှေ့က ပါးစပ်ထဲ လိုးဆောင့်နေသော အောင်ကိုမြင့် ပြီးသွားပြီး ဇီဇဝါ့ မျက်နှာကို သုတ်တွေ ပန်းထည့်လိုက်သည် . .။ ကီပင်ဘ၀ မှာ ကောင်းကောင်းထားတာ အေးအေးဆေးဆေးမနေဘဲ ဖေါက်ပြန်တဲ့ ကောင်မ ..ဖါတန်းပို့ပြီး ဖါသည် လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ် . . အောင်ကိုမြင့် နဲ့ သူ့လူတွေ အားရပါးရ တယောက်ပြီးတယောက် .. လိုးကြသည် ..။ သူတို့ လီးတေကွို ဇီဇဝါ စုတ်ပေးရ သည် .. ။ စောက်ပတ်ရော ဖင်ပါ တအားလိုးဆောင့်ကြသည် . .။ဇီဇဝါ့ကို.. အဝတ်ပေးမဝတ်တော့ . .။
ဒီတော့မှ..ဦးလေးစိုးသည်…သာမန်..စီးပွါးရေးသမားကြီးတယောက်မဟုတ်ဘဲ..လူ မိုက်ခေါင်းဆောင်..လူယုတ်မာကြီးတယောက်ဆိုတာဇီဇဝါ….သိရှိသဘောပေါက်ရ လေသည် . .။ ဇီဇဝါ ခွေေ ခွလေး လေဲ နတုံးမှာဘဲ ဖါခေါင်း မြဲကုတ် ဆိုတဲ့ အသားမမဲဂင်တိုတိုလူမိုက်တယောက် ရောက်လာ သည် .. ။ တကယ်နှိပ်စက်မဲ့ ရုပ် . .။ မြဲကုတ် က သူ့ ဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်သည် ။ ရှည်လျား တုတ်ခိုင်တဲ့ လီးမမဲြဲကီး ကို ဇီဇဝါ စိတ်ပျက်စွာ တွေ့လိုက်ရသည် ..။ေ၈ါ်လီတေပွ တ်လည်ထည့်ထားတဲ့လီးကြီးသည.်.ဆေးကြောသန့်စင်ထားတဲ့ ပုံမပေါ်..။ ကောင်မ . .လာစမ်း . .ငါ့လီး ကို စုတ်ပေးစမ်း . . မြဲကုတ် ရှေ့ ဒူးထောင်ပြီး သူ့ လီးမမဲြဲကီးကို လှမ်းဆုတ်ကိုင် ကာ ပါးစပ်ထဲ ငုံလိုက်ရသည် . .။ ဇီဇဝါ ထင်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ .. ။ လီးကြီးဆီက ဆိုးဝါးတဲ့ အနံ့ ကြောင့် ဇီဇဝါ ပြို့တက်သွားရသည် . .။ ငံကျိကျိ အရသာခါးခါး ကြောင့် မစုတ်ဘဲ ရပ်လိုက်တဲ့ ဇီဇဝါ့ခေါင်းကို မြဲကုတ်က တဖြောင်းဖြောင်း ရိုက်သည် . .။ သခင်အားရ ကျန်ွပါးဝ ဆိုသလို ဦးလေးစိုးကျေနပ်အောင် ဇီဇဝါကို အစမွ်းကုန် နှိပ်စက်ကြတာပါဘဲ . .။လီးကို ကျေနပ်အောင် စုတ်ပေးအပြီး ..မြဲကုတ် သည် ဇီဇဝါ့ကို လိုးပါတော့သည် . .။ စောစောက အောင်ကိုမြင့်တို့အလိုးကို ခံရတာထက် ပိုမို ဆိုးဝါးလှသည် .. ။မြဲကုတ် သည် အလကားနေရင်း လိုးနေတုံးလဲ ရိုက်နှက်နေသည် . .။ စောက်ပတ်ကိုရော ဖင်ပေါက်ကိုရော မြဲကုတ် စိတ်ကြိုက် လိုးသည် ..။ ဂေါ်လီတွေ ပတ်လည် ထဲ့ထားတဲ့ မဲ ကြုတ်ရဲ့ လီးကြီး နဲ့ ဖင်ကို .. အလိုးခံရသောအခါ ..ဇီဇဝါ ..မချိမဆန့် ခံလိုက်ရသည် ..။ လီးကကြီး..ဂေါ်လီတွေ ပါရတဲ့အထဲ မြဲကုတ်သည် လူမဆန် . .။ စောစောကထဲက အောင်ကိုမြင့်တို့ လူစု ပက်ပက်စက်စက် လိုးတာကို ခံထားရလို့..အလန်ွနာကျင်နေရတဲ့ ဇီဇဝါဟာ မြဲကုတ် ဆောင့်လိုးတာတွေကို ထပ်ခံရပြန်သည် . ..။ အားနည်းတဲ့ လူကို အနိုင်ကျင့်ရက်ကြတာကို ဇီဇဝါ အံ့သြလို့ မဆုံးဘူး ..။ အဝလိုး ပြီးတော့ဇီဇဝါ့က.ို.မြဲကုတ်က..သူ့နေရာကို..ခေါ်ဆောင်သွားလေသည် ..။ဇီဇဝါသည် အရင်ဆုံး မြဲကုတ် ကို အကာအကယ်ွပေးထားတဲ့ အစိုးရ အရာရှိတေကွို စိတ်ကြိုက် ကုန်းပေးရ ..လီးစုတ်ပေးရသည် . .။ နောက်ပိုင်းမှာ ..မြဲကုတ်ရဲ့ ဖါခန်းမှာ နေ့ရောညရော လူပေါင်းများစွာ ရဲ့ အလိုးကို ခံရအပြီး လူကုန်ကူးတဲ့ ဂိုဏ်းတခုကို မြဲကုတ်က ရောင်းစားတာကို ခံလိုက်ရသည် . .။
ဇီဇဝါ အပါအဝင် မိန်းကလေးတွေ ကို တဖက်နိုင်ငံကိုပို့ဖို့..အိမ်ကြီးတလုံးထဲမှာ ..ထား သည် . .။ နေ့တိုင်းဘဲ သူတို့ကို ဖမ်းထားတဲ့ အစောင့် လူမိုက်တွေ.. လိုးတာတေကွို ခံကြရသည် . .။ဒီလူတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်သည် သန်းတင်စိုး ဆိုတဲ့ လြူကီး . .။ သန်းတင်စိုး သည် ဖြူဝင်းပြီး ထင်းနေသော ဇီဇဝါကို တွေ့ သွားသောအခါ..သူ့ဆီကို ခေါ်ခိုင်းလိုက် သည် ..။ သန်းတင်စိုးကလဲ ဇီဇဝါ့ကို မြဲကုတ်လိုဘဲ ရက်ရက်စက်စက် လူမဆန်စွာ နဲ့ စောက်ပတ်ရော ဖင်ပါ လိုးသည် . .။ ခံရတာများလို့ ဇီဇဝါ ခံနိုင်ရည် ရှိနေပြီ . .။ သန်းတင်စိုးသည် ဇီဇဝါ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ပြီးလေ့ ရှိသည် . .။ သူ့ သုတ်ရေတွေကို မြိုချမှ ကြိုက် သည် . .။ ဘယ်ဘဝဟောင်းက ဝပ်ကြေွး ပါလိမ့် လို့ ဇီဇဝါ မျက်ရေ ဖြိုင်ဖြိုင်ကျရင်း တွေး မိသည် . .။ဇီဇဝါတို့ ထက်ွပြေးဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ မအောင်မြင် . .။ နေမင်း သည် ဇီဇဝါ့ကို ဦးလေးစိုး ပြန်ခေါ်သွားကထကဲ ဇီဇဝါ့ကို ပြန်မတွေ့ ဖြစ်တော့ ..။သူသည် ဇီဇဝါ ဘယ်မှာနေသလဆဲိုတာလဲ မသိ ..။ ဇီဇဝါ ကဘဲ သူ့ကို ဆက်သယ်ွတာ ..။ ၃လလောက်ကြာပြီးနောက် နေမင်းဖုန်းလာလို့..ကိုင်လိုက်သောအခါ ဇီဇဝါ ဖြစ်နေသည် . .။ နေမင်း အလန်ွဘဲ ဝမ်းသာသွားသည် . .။ ဇီဇဝါသည် သန်းတင်စိုးတို့.လူကုန်ကူးတဲ့ဂိုဏ်းကိုရဲတွေဖမ်းမိလိုက်တာကြောင့်.. . .ပြန်လတ်ွလာသည် ..။ ဇီဇဝါ က နေမင်းကို သူမကို လာတွေ့ နိုင်မလား လို့မေးသည် . .။ နေမင်းလဲ ဝမ်းသာအားရ ဇီဇဝါ့ဆီကို ပြေး သွားသည် . .။ ဇီဇဝါ့ ဘ၀ မှာ ဆိုးဝါးခက်ခတဲာတွေ ဒီမျှနဲ့ဘဲ ပြီးပါစေတော့လို့ နေမင်း ဆုတောင်းပေးရင်း သူမ ရှိရာကို သွားနေသည် …… ပြီးပါပြီ။